Fosaprepitant dimeglumine (EMEND) powder (265121-04-8) | AASraw
/ Products / MaR & D Reagents / Fosaprepitant dimeglumine (EMEND) upfu
Rating: SKU: 265121-04-8. Category: MaR & D Reagents
MUTSVENE unofanirwa nekugadzirisa uye kugadzira zvigadzirwa kubva kugiramu kusvika pakukura kweFosaprepitant dimeglumine (EMEND) powder (265121-04-8), pasi peCGMP mutemo uye nehutsika hwehutano hwehutano.
Fosaprepitant Dimeglumine powder ndiyo dimeglumine mararamiro emunyu we fosaprepitant, kusunuka kwemvura, N-phosphorylated prodrug ye aprepitant, ine antiemetic basa. Pamusoro pekutengesa kwemukati uye kukurumidza kutendeuka kuenda kune aprepitant, mutendi uyu anosunga kusarudzwa kune chinhu chemunhu P / neurokinin 1 (NK1) mvumo mukati memutambo wenheyo (CNS). Izvi zvinodzivisa kutora kusungira kwezvinhu zvinogadzirisa P uye zvinodzivirira zvinhu P-induced emesis.
Fosaprepitant dimeglumine (EMEND) yevhidhiyo yevhidhiyo
Fosaprepitant dimeglumine (EMEND) powder Basic Characters
Name: Fosaprepitant dimeglumine (EMEND) powder
Molecular Formula: C23H22F7N4O6P.2C7H17NO5
Molecular Kurema: 1004.83
Color: chena kusvika kune-white white amorphous powder
Fosaprepitant dimeglumine (EMEND) Kushandiswa kwepoda
Fosaprepitant dimeglumine poda (CAS 265121-04-8)
Fosaprepitant dimeglumine Powder use
Mukubatana nemamwe antiemetic agents, nekuda kwekudzivirira kwepamusoro uye kunonoka kushungurudza uye kurutsa kunobatanidzwa nedzidzo dzekutanga uye dzinodzokorora zvepamusoro uye zvine mwero emetogenic cancer chemotherapy, kusanganisira high-dose cisplatin.
Yambiro pa EMEND powder (CAS 265121-04-8)
Fosaprepitant inofanira kushandiswa nekuchenjerera kune varwere vanowana mishonga inogadzirisa iyo inonyanya kugadziriswa kuburikidza neYP3A4.
Kushandura kwekukurumidza kwemashoko kunogona kuitika panguva yekudzivirira. Varwere vave kazhinji vakagamuchira kuregera. Hazvikurudzirwe kuti udzorezve kuiswa. (B)
Kutungamirirwa kwe fosaprepitant kana aprepitant ne warfarin (a CYP2C9 substrate) kunogona kukonzera kuderera kwechirwere muNyika Dzepasi Pose Ratio (INR) yeprothrombin time. (C)
Kubudirira kwehutachiona hwemakemikari mukati uye kwemazuva 28 mushure mekupedzisira chirwere che fosaprepitant kana aprepitant chinogona kuderedzwa. Nzira dzakasiyana kana dzokudzokera shure dzekudzivirira kubata pamuviri dzinofanira kushandiswa. (D)
A: CYP3A4 Kupindirana Fosaprepitant inokurumidza kuchinjwa kuva aprepitant, iyo inhibitor inonyoresa yeYP3A4 apo inoshandiswa seA3-day antiemetic dosing regimen yeCINV. Fosaprepitant inofanira kushandiswa nekuchenjerera kune varwere vanowana mishonga inogadzirisa iyo inonyanya kugadziriswa kuburikidza neYP3A4. Kuvhiringidzika kweYP3A4 ne aprepitant kana fosaprepitant kunogona kukonzera kuwedzera kwema plasma yezvinodhaka zvinoshandiswa. Apo fosaprepitant inoshandiswa concomitantly nedzimwe CYP3A4 inhibitor, aprepitant plasma kuwedzera kunogona kukwidziridzwa. Apo aprepitant inoshandiswa kuwirirana nemishonga inobatsira CYP3A4 basa, aprepitant plasma kuwedzera kunogona kuderedzwa, uye izvi zvinogona kukonzera kuderera kwekuita kweprepitant. Chemotherapy agents ayo anozivikanwa kuti ane metabolized ne CYP3A4 anosanganisira docetaxel, paclitaxel, etoposide, irinotecan, ifosfamide, imatinib, vinorelbine, vinblastine uye vincristine. Mune zvidzidzo zvekuchipatara, chirongwa chemugodhi chinonzi aprepitant regimen chaiwanzoshandiswa ne etoposide, vinorelbine, kana paclitaxel. Maitiro evanhu ava haana kukonzerwa nekodzero yekusanganisa kushandiswa kwezvinodhaka. Mumapurogiramu akasiyana-siyana epa pharmacokinetic, hapana hutachiona hwekuchinja mu docetaxel kana vinorelbine pharmacokinetics yakaonekwa apo muromo wepamusoro weprepitant regimen waitungamirirwa. Pamusana pechidiki chevarwere mune zvidzidzo zvekuchipatara avo vakagamuchira CYP3A4 substrates vhuristine, vincristine, kana ifosfamide, kunyatsocherechedza nekuchenjerera kuongororwa vanokurudzirwa kune varwere vanogamuchira idzi majeri kana mamwe makemikari maitiro anoshandiswa zvikuru neYP3A4 asina kudzidza.
B: Hypersensitivity Reactions Zvinyorwa zvinoshandiswa pakarepo zvinokonzerwa ne hypersensitivity zvinosanganisira kufema, erythema, dyspnea, uye anaphylaxis zvakaitika munguva yekudzivirira kwe fosaprepitant. Aya maitiro ekunyengera anowanzobvuma kuregererwa kwekuderedzwa uye kutungamirirwa kwehutano hwakakodzera. Kudzorerwa kwemukana wekudzivirira hakukurudzirwi nevarwere vanoona zviratidzo izvi munguva yekutanga-shandisa.
C: Kutungamirirwa neWarfarin Kutungamirirwa kwefosaprepitant kana kuparidzirana nehondo kunogona kukonzera kuderera kwechirwere muHorldalized Ratio Ratio (INR) yeprothrombin time. Kune varwere vane chirwere chisingaperi chine warfarin, INR inofanira kunyatsoongororwa munguva ye2-vhiki, kunyanya paZ7 kusvika kune 10 mazuva, mushure mekutanga kwe fosaprepitant nemukemikirini yemakemikari.
D. Kutungamirirwa neHormonal Contraceptive Pamusoro pokutungamira ne fosaprepitant kana aprepitant, kushanda kwemasimba ekudzivirira mishonga kunogona kuderedzwa mukati uye kwemazuva 28 uchitevera chiitiko chekupedzisira che fosaprepitant kana aprepitant. Nzira dzakasiyana-siyana kana dzekudzoka shure kwekudzivirira kubata pamuviri dzinofanira kushandiswa panguva yekurapa uye uye kwemwedzi we1 uchitevera chiitiko chekupedzisira che fosaprepitant kana aprepitant [ona Drug Interactions]. 5.5 Inogara Ichiripo Inoshandiswa Kusingaperi kushandiswa kweEENDEND powder yeInjection yekudzivirira kusuruvara nekurutsira hakukurudzirwi nokuti haina kudzidza; uye nokuti kushandiswa kwepurogiramu yemishonga kunogona kuchinja panguva isingaperi inoshandiswa kushandiswa.
Fosaprepitant dimeglumine poda yejekiseni 150 mg yave kuratidzwa muvanhu vakuru pamwe chete nemamwe maantiemetic agents ekudzivirira kunonoka kusvotwa uye kurutsa kunoenderana nekutanga uye kudzokorora makosi eMEC. Muyero unobvumidzwa muvakuru ndeye 150-mg intravenous (IV) infusion pamusoro pemaminetsi makumi maviri kusvika makumi matatu maminetsi makumi matatu maminetsi asati aitwa chemotherapy paZuva 20. Kugamuchirwa kweDAA kwechiratidzo ichi chitsva kwaive kuchikamu mune zvakawanikwa kubva kune yakasarudzika, yakafanana, doubleblind, inoshingairira muenzanisi-inodzorwa kudzidza iyo yakayedza fosaprepitant yejekiseni seyakangoiswa infravenous infusion pamwe neonadansetron uye dexamethasone (inonzi EMEND powder regimen) (N = 30) ichienzaniswa neonadansetron uye dexamethasone chete (control regimen) (N = 30) mune varwere vanogamuchira MEC. Mhedzisiro yekupedzisira yaive mhinduro yakazara (yakatsanangurwa sekusarutsa uye kusashandisa kurapa kwekurapa) muchikamu chakanonoka (maawa makumi maviri nemakumi maviri nemakumi maviri zvichitevera kutanga kwekemotherapy) yekemotherapy-inosimudzira svoto uye kurutsa. A 1% yakazara yekupindura mwero yakaonekwa pamwe neiyo Fosaprepitant dimeglumine powder regimen ichienzaniswa ne502% ine regimen yekudzora (P <498). Maitiro akasarudzika akaipisisa akataurwa muEMEND poda regimen maringe nematanho ekudzora kwaive kuneta (25% vs 120%), manyoka (78.9% vs 68.5%), neutropenia (0.001% vs 15%), asthenia (13% vs 13%) , kupererwa neropa (11% vs 8%), peripheral neuropathy (7% vs 4%), leukopenia (3% vs 3%), dyspepsia (2% vs 3%), Urinary Tract Utachiona (2% vs 2%), uye kurwadziwa kwekupedzisira (1% vs 2%).
Chiratidzo Fosaprepitant dimeglumine powder yejojo, pamwe chete nezvimwe zvinorwisa antiemetic, inoratidzwa kune vanhu vakuru kuti vadzivirire zvakanyanya uye zvakanonoka kushungurudza uye kushushikana kunoenderana nemakadzi ekutanga uye okudzokorora emakemikari ane kemikirini yakakura kwazvo, kusanganisira high-dose cisplatin; uye nekudzivirira kunonoka kunonoka uye kurutsa kunobatanidza nekutanga uye kudzokorora zvidzidzo zvine mwero emetogenic kenza chemotherapy.
Fosaprepitant dimeglumine powder yejojo ​​haisati yadzidza nezvekurapa kwekusimbiswa kwechisimba uye kurutsa.
Fosaprepitant dimeglumine powder Marketing
Nzira yekutenga Fosaprepitant dimeglumine powder: kutenga EMEND powder kubva kuAASraw